Shina Smart Posture Corrector Manufacturing and Factory | Hongzhu
INDRINDRA CORRECTOR INNOVATIVE: afaka manitsy anao ny mpanitsy amin'ny posture mahay manampy anao hanitsy ny fahazarana ratsy ary hanamaivana ny fanaintainana ao am-bozonao sy soroka, dia hatoky tena kokoa ianao amin'ny lohanao. Ny fanitsiana dia manana endrika famolavolana induktre farany indrindra, hamela anao hanitsy ilay fehezanteny marina amin'ny alàlan'ny fampahatsiahivana ny fantsom-pifandraisana, fa tsy ny famerana ny fehin'ny fanitsiana nentim-paharazana. Ny mpanitsy ny posture dia nanolo-tena hitondra anao sy ny fianakavianao eo amin'ny fiainana ara-pahasalamana sy ara-tsiansa.
INTELLIGENT POSTURE REMINDER:Raha miondrika mihoatra ny 25 degre ny lamosin'ny mpampiasa, ny fampahatsiahivana ao ambadik'i aoriana dia hahatsapa ho azy avy hatrany ary ahetsika avy hatrany ny fanairana fanamafisana; Rehefa miondrika ny soroka ary tsy mihetsika ny fihenjanana, mangovitra avy hatrany ilay sensor. Fampahatsiahivana, fanamafisan-tsiansa, fanitsiana siantifika, soroka malalaka ary mihemotra, Mahitsy ny mpanitsy mba hiarovana sy manampy ny ankizy hitombo.
SORATORA MPANORANA sy MAHAY:Taorian'ny fitsapana maro an'ny Back Straightener, dia manoro hevitra izahay fa ny mpampiasa dia mitafy ny mpanitsy ny paositra mandritra ny 2 ora isan'andro. 21 andro no vanim-potoana fananganana fahazarana, ary hihatsara ny faharetana, 90 andro ny fikirizana no hiditra amin'ny vanim-potoana fahazarana. Tsy mora ny fizotran'ny fanitsiana, ary maharitra ihany izy io aorian'ny fikirizana.
DESIGN ERGONOMIKA:Ny soroka soroka dia vita amin'ny volon-koditra vita amin'ny soroka, izay manatsara ny fahatsapana fofon'aina nefa tsy mikorontana. Ny famoronana endrika vaovao dia ergonomika ary mifanentana amin'ny lakan'ny vatana. Ny soroka soroka dia mora ampifanaraka, milamina ary tsy mihena. Ary ny fehin-kibo dia mampiasa fehikibo nylon elihitra avo lenta kokoa ho an'ny elastika tsara kokoa sy ny fampiononana kokoa, izay mety ho an'ny olona 15 kg ka hatramin'ny 95 kg. Ny toeran'ny kodiarana amin'ny lamosina dia mety ary afaka manokatra ny tenanao irery.
ANDRO FANDROSOANA:Ny mpanitsy ny lamosina dia mampiasa batterie lithium polymer 500mAh ary azo ampiasaina mandritra ny 15 andro aorian'ny fametrahana ny ora 2 ora, mora ny maka izany amin'ny fampifandraisana ny tariby USB. Ny switch dia manana jiro indostrialy, ny jiro mena maharitra dia midika fa ny fiampangana mahazatra, ny jiro manga maharitra dia midika fa feno / miasa mahazatra. Raha tsy afaka mamerina ny fampahatsiahivana ianao dia alefaso mandritra ny 10 minitra aloha. Na inona na inona olana azonao idirana ny tranokalanay www.hongzhumedical.com, homenay vahaolana mahafa-po ianao.
Previous: Mpitam-paositra J15
Manaraka: Wheelchair G-T01
Mpitondra filaminana azo narindra
Elektronika postur corrector
Mpitsabo mpanentana fahasalamana
Mpitondra hafatra amin'ny tonga lafatra
Mpitandro ny laharana ambony
Mpanorina posture J01
Miverina Brace D16